श्रीमती र सन्तानको ह’त्या गर्दै डाक्टरले डायरीमा लेखे – ओ’मि’क्रोनले सबैलाई मा’र्नेछ – Online Khabar 24
गत शुक्रबार भारतको उत्तर प्रदेशस्थित कानपुरमा एउटा फ्ल्याटमा द’र्दनाक ह’त्का’ ण्ड भएको छ। जानकारी अनुसार कल्याणपुरका एक डाक्टरले शुक्रबार साँझ श्रीमती, एक छोरा र छोरीको ह’ त्या गरेका छन्।
श्रीमती र छोराछोरीको हत्यापछि उनले भाइले म्यासेज गरे र प्रहरीलाई बोलाउन भने। भाइ आउनुअघि नै अभियुक्त डाक्टर घट’नास्थलबाट फ’र भइसकेका थिए। प्र’हरीले घ’टनास्थलबाट एउटा डायरी फेला पारेको छ, जसमा डाक्टरले कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’लाई हत्याको कारण बताएका छन्।
कानपुरको रामा मेडिकल कलेजमा कार्यरत सुशील सिंह आफ्नी श्रीमती चन्द्रप्रभा, छोरा शिखर र छोरी खुशीसँग डिभिनिटी होम अपार्टमेन्टको पाँचौं तलामा रहेको फ्ल्याट नम्बर ५०१ मा बस्थे। चन्द्रप्रभा शिवराजपुर जुनियर हाई स्कुलकी शिक्षिका थिइन्। छोरा शिखर CLAT को तयारी गर्दै थिए। छोरी खुशी वुडवाइन स्कुलमा १० कक्षाको विद्यार्थी थिइन्।
शुक्रबार साँझ करिब ५:३२ बजे डा. सुशीलले आफ्ना भाइ सुनिल सिंहलाई ह्वाट्सएपमा सन्देश पठाए। जसमा लेखिएको थियो कि, ‘भाइ, पुलिसलाई भन कि मैले चन्द्रप्र’भा, शिखर, खुशीलाई डि’प्रेस’नमा मा’रेको छु।’
म्यासेज पढेर सुनिल सिंह हतारहतार आफ्नो डाक्टर दाइको फ्ल्याटमा पुगे। फ्ल्याटमा ताला लगाइएको थियो। गार्डको सहयोगमा ढोका फोड्दा भित्रको दृ’श्य देखेर सबै ड’राए। डाक्टरकी श्रीमती र दुवै छोराछोरीको शव भुइँमा र’गत लत’पतिएको अवस्थामा थियो। सुनिलले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। कानपुरका प्रहरी आयुक्त असीम अरुण, अतिरिक्त आयुक्त आनन्द प्रकाश तिवारी बलसहित घ’ट’नास्थल पुगेका थिए।
को’ठाबाट फेला परेको डा’यरीमा लेखिएको छ, ‘अब कोभिड छैन। यो ओमिक्रोनले अब सबैलाई मा’र्नेछ। अब लाशहरू गनिने छैन। मेरो लापरबाहीले गर्दा, म क्यारियर बिन्दुमा फ’सेको छु जहाँबाट बाहिर निस्क’न असम्भव छ। कुनै भविष्य छैन। त्यसैले मेरो हो’शमा, म मेरो परिवारलाई न’ष्ट ग’रेर मेरो परि’वारलाई न’ष्ट गर्दैछु। यसको लागि अरू कोही जि’म्मेवार छैन।’
डायरीमा अगाडि लेखिएको छ, ‘म नि’को न’हुने रो’गबाट ग्र’सि’त छु। भविष्य देखिँदैन। यो बाहेक मसँग अर्को विकल्प छैन। म आफ्नो परिवारलाई सम’स्यामा छा’ड्न सक्दिनँ। म यो गर्न गइरहेको सबैलाई मु’क्त गर्दैछु। सबैलाई हटा’उनेछु। एकै पलमा दुः’ख। म पछाडि कसैलाई पनि दुः’खमा देख्न सक्दिनँ। मेरो आ’त्माले मलाई कहिल्यै मा’फ गर्ने छैन।’ यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevदिदी भिनाजुको बिचमा जाँदा सालीको भयो यस्तो अवस्था …
next‘ओमिक्रोन भेरियन्ट’ कति घा’तक, नेपालमा फैलिने सम्भावना कति? यस्तो छ सम्भावना